[झटारो] प्रचण्ड समीक्षा « Khasokhas Follow @khasokhasmag
[झटारो] प्रचण्ड समीक्षा
स्थानीय निर्वाचन परिणामबारे पार्टीहरूको आन्तरिक समीक्षा जारी छ । हारको कारण धाँधली वा सत्ताको दुरुपयोग भनेर अर्काकै आङको जुम्रोतिर औँलो तेस्र्याउने पुरानै परम्परा हो । तर, कमरेड प्रचण्डको कुरै बेग्लै । सबैभन्दा कटु र निर्मम समीक्षा गर्नमा कमरेड प्रचण्ड एक नम्बर ठहरिए । उनले कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आफ्नै आङका लिखा पनि मज्जाले केलाए । उनको निष्कर्ष छ, चुनाव हार्नुको मुख्य कारण आफ्नै पार्टीका नेताहरू दलालका पछि लागेर हो । कत्रो गम्भीर र पारदर्शी समीक्षा !
पार्टीले चुनाव हार्नुका कारण बताउँदै प्रचण्डले भनेछन् :
हाम्रो पार्टीका नेताहरू दलाल, ठेकेदार, व्यापारी र दुई नम्बरीका पछि लागेका छन् । कार्यकर्ताहरू सिंहदरबारमा फन्का मारिरहेका छन् । संगठन सखाप भएको छ । क्रान्ति खियाले डल्लो परेको छ । अध्ययन, चिन्तन, लेखन माइनसमा गएको छ । खानपान, मनोरञ्जन र मोजमस्ती मौलाएको छ । हामी अल्छी, सुतुवा र भुँडे भएका छौँ, सत्ता र भत्ताका भोगी भएका छौँ । हामी पैसा, सुविधा, पद, गाडी, गार्ड र स्यालुटको नशामा फसेका छौँ । भएभरका सबै नेता, कार्यकर्ता र समर्थकलाई केन्द्रीय सदस्य चाहिएको छ । ‘तैँ रानी मै रानी, कसले भर्ने कुवाको पानी’ भन्ने उखान हामीमा चरितार्थ भएको छ । अनि, जितिन्छ चुनाव ?
हाम्रो हुती हेर्नूस्, हामीले आफ्नै खेतमा फलाएको वासमती चामल बेच्न सकेनौँ, शत्रुहरूले हाम्रै बारीबाट चोरेर लगेको मकैको ढुटो मजाले बेचेर टन्न भोट कमाए । बाहिर हल्ला नगर्नु होला, हामीभित्र त खुलेरै छलफल गरौँ न ! चुनाव जित्नका लागि मतपत्र च्यात्नुपर्ने अवस्था आउनु कति लाजमर्दो हो ! अरूले गरेको भए हामी के भन्थ्यौँ ? अप्ठ्यारो पनि कस्तो भने अरूलाई दोष लगाउने ठाउँ पनि छैन । चुनाव गराउँदा हामी सत्तामै थियौँ । हामी सत्तामा मात्रै भयौँ, जिल्लामा, गाउँमा, पहाडमा, तराईमा भएनौँ । अनि, जितिन्छ चुनाव ?
चुनावका मुखैमा आएर हामी खुव दौडिएझैँ गर्‍यौँ । नाचेझैँ पनि गर्‍यौँ । तर, कता दौडिँदा कहाँ पुगिन्छ, कसरी नाच्दा धेरै भोट आउँछ, थाहै पाएनौँ । हामी दौडिएर जहाँ पुग्थ्यौँ, त्यहाँ अरू नै पुगेर पहिलो भइसकेका हुन्थे । दौडिँदा दौडिँदा सासै जालाजस्तो भयो तर कहीँ पुुगिएन । हाम्रो नचाइको सुरताल पनि ठ्याम्मै मिलेन । कहिले कांग्रेसको तालमा, कहिले मधेसवादीको तालमा, कहिले चीनको तालमा, कहिले भारतको तालमा । माओवादीको मौलिक ताल नै गुमाएर बेसुरा नाचेपछि जितिन्छ चुनाव ?
यसो भनेर मैले हामी माटोमै मिल्यौँ भनेको होइन, चित्त बुझाउने ठाउँ पनि छ । चुनावमा हामीले हारे पनि हाम्रा एजेन्डाले जितेका छन् भनेर तपाईंहरूले हल्लाखल्ला मच्चाउँदै आएको एकदम ठीक छ ।
यसलाई अझै चर्को स्वरमा उराल्नुपर्छ । भुइँमा पछारिए पनि खुट्टा मेरै माथि छन् भन्न छाड्नु हुँदैन । अहिले नै खुट्टा तन्काएर लम्पसारै परिहाल्नु हुँदैन । अलिअलि खुट्टा हल्लाउँदै गर्नुपर्छ, उठ्न बल लाउँदै गर्नुपर्छ । अब प्रदेश–२ को चुनाव आउँदैछ । त्यसमा हामी एक नम्बर पार्टी बन्नुपर्छ ।
यो हाँस्ने कुरा होइन । मैले साँच्चै भनेको प्रदेश–२ मा एक नम्बर हुने गरी तालसुर मिलाएर हामी सबै अब त्यतै लागौँ ।